Koraaya geedo basbaas | December 2019
Ugu Weyn Ee Koraaya geedo basbaas
Baasaboor Bulgarian: sida loo koro geedo tayo leh
Peppers ama Paprika, kaas oo xubin ka ah qoyska Solanaceae, oo nala yaqaan annaga oo ah basbaas macaan. Inkasta oo magaca, khudraddan waxba kuma laha baas madow oo madow. Khudradda khudradda waa dhaqan aad u fara badan, taas oo loo tixgelinayo goobaha dhalashada ee Maraykanka. Cuntadani waxay jecel tahay qoyaanka iyo kuleylka, laakiin caqabadahaasi ma celin karaan inay bannaanka u soo jeediyaan beerashada badi iyo ka badan oo ah noocyo kala duwan oo ah basbaas oo lagu koriyo oo lagu koriyo.
Bariisku waa geedka ugu quruxda badan oo ah meel lagu aaso tropics. Ma aha qof walba inuu ku raaxeysto saxan taas oo dhaqankaas khudradda ah lagu daro feejignaan sare. Laakiin chili waa xiiso u banneeyayaasha kuwaas oo doonaya in ay wax badan ka ogaadaan beerashada.
Sifooyinka ka mid ah beerista guul leh ee basbaaska yar yar on windowsill ah
Bonsai-sida duurjoogta, caleemo quruxsan oo qurux badan oo ah midabyo aan caadi ahayn iyo midabyo, tani waa kalluumeysiga bacrimiga u eg sida windowsill. Cirqiga oo dhan oo miyir-beel ah ayaa la yiraahdaa capsicum, sababtoo ah waxa ku jira maaddada kaabsacin, kaas oo siinaya miraha iyo abuurka dhadhan guban. Mirahaas waxaa loo isticmaali karaa sidii xayawaan, samee tinctures daaweyn.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Koraaya geedo basbaas 2019